Semalt Expert: Windows PC Protection amin'ny virosy sy ny malware
Ny Windows miovaova dia mahatonga antsika tsy afaka manolotra olona izay tsara indrindra amin'ny programa Antivirus na dia mandany 20 taona aza ny soso-kevitra amin'ny programa Antivirus maro. Na izany aza, ny foto-kevitra fototra dia ny fahatsapana fa misy olona iray mety hampidi-doza, ny tsy fahampiana azy dia hahatonga ny ordinaterany ho voan'ny aretina ary tsy mampiasa Anti-Virus ihany.
Oliver King, mpitantana ny Success Successor Semalt Digital Services, dia manome fahatakarana ny torolàlana momba ny fiarovana Windows PC.
fandrahonana rindrambaiko maloto
Tsy toy ny tamin'ny taloha, izay nahatonga ireo amboara hampiditra malware, amin'izao fotoana izao dia lasa raharaham-barotra lehibe ny malware. Voalohany indrindra, manangona ny mombamomba azy manokana izy ireo fa tsy voafetra ny antsipiriany ara-bola sy ny tenimiafina manokana. Ankoatra izany, manamboatra fomba hanakorontanana ny olona ho an'ny ransomware izy ireo. Mba hiatrehana ireo rehetra ireo, miantoka ny fanampiana an-tserasera amin'ny alàlan'ny zavatra heverinao fa sarobidy.
famakiana sy fandaharana
Voasoratra amin'ny Windows ny fanombohana ny vokatra AV mba hiatrehana ny tsy filaminana. Raha ny marina, ny fampidirana ny "Trustworthy Computing Initiative" nataon'ny iray amin'ireo mpanorina an'i Microsoft dia nanome lanja ny laharam-pahamehana indrindra i Bill Gates. Amin'izao androntsika izao, ny Windows 10 dia mirakitra fiarovana sy teknolojia maro mikendry ny fanalefahana ny mety ho fandrahonana. Raha ny marina dia azo heverina ho iray ny manatsoaka hevitra fa ny Oracle java izay mpampiasa fahatarana sy ny rindrambaiko Adobe hafa dia tena tandindonin-doza.
Ankoatra izany, ny navigateur web dia manao fandrosoana goavana amin'ny fiarovana ny vokatra. Ohatra, Chrome dia manohana navigateur amin'ny alàlan'ny sandboxed, amin'ny lafiny hafa, Google dia manolotra ny dikan'ny hoe" bug " bounty 'izay manentana ireo manam-pahaizana hitady lavaka lava ao anaty Chrome na Androids. Manome vola be izy ireo, hatramin'ny dolara amerikana iray tapitrisa, na mihoatra ny telo tapitrisa tamin'ny taon-dasa.
Ankoatra izany, Google dia manana 'fialokalofana azo antoka' izay ahafahana mamantatra ireo tranonkala tsy misy malware. Ny Safari, Firefox, Chrome, ary Vivaldi rehetra dia mampiasa io fomba io raha toa ka mampiasa ny sivana SafeScreen ny Windows 10. Ankoatra izany, ireo izay mampiasa Windows 10 dia mila manavao ny browsers amin'ny fampiasana fitaovana toy ny Patch My PC, Personal Inspector, na mampiasa Kaspersky Software Updater.
Ny olana AV
Justin Schuh, manam-pahaizana momba ny fiarovana Chrome, dia nanafika ny Vesselin Bontchev, manam-pahaizana momba ny AV. Ankoatra izany, Robert O'Callahan dia ao anaty rakitsoratra manoro ny olona hanaisotra ny rindrambaiko AV fa tsy amin'ny Microsoft. Noho izany dia nanjary fitsipika izay tsy manoro hevitra ny olona momba ny antony tsy ahafahan'i AVs miasa, satria, amin'ny lafiny iray, dia mandray soa amin'ny fiaraha-miasa AV. Na izany aza, ny Windows dia mbola kely voatsikera izay mety hahatonga azy io ho tsara indrindra.
Fomba hanoherana izany
Mino ny manam-pahaizana fa ny AV dia tsy safidy tsara indrindra, ny fomba tsara indrindra ampiasana Windows 10 amin'ny fampiasana ny sivana SmartScreen, ny telemetry fototra ary ny heuristika rahateo. Faharoa, mampiasa Windows, fa tsy mpandrindra fotsiny fa mpampiasa marika. Fahatelo, miantoka ny fampivoarana tsy tapaka ny rindrambaiko PC. Ankoatra izany, mamerina ny angon-drakitrao rehetra. Ankoatra izany, manaova fandaharam-potoana ho an'ny anton-draharaha tsara indrindra anao ary ampiasao farany ny Windows 10 mba hamelomana, famerenana sy famerenana ny safidy.
Etsy andaniny, ho an'ireo izay tsy mampiasa Windows, misy ny sasany amin'ireo tsara indrindra AV amin'ny tsena izay ahitana, Avast, AVG, Bitdefender, Kaspersky ary Trend Micro. Mahasoa foana ny mampiasa ny iray izay mifanaraka amin'ny zavatra ilain'ny olona Source .